Jose Mourinho oo ka hadlay suurtogalnimada uu Christian Eriksen kaga dhaqaaqi karo Tottenham – Gool FM
(London) 15 Jan 2020. Macalinka reer Portugal iyo kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ee in Jose Mourinho ayaa ka hadlay suurtogalnimada uu Christian Eriksen kaga dhaqaaqi karo Spurs-ka inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee bishan Janaayo.
Qandaraaska uu Christian Eriksen ku joogo kooxda Tottenham Hotspur ayaa wuxuu dhacayaa bisha Juun ee soo aadan, laacibkan ayaana wali saxiixin heshiis cusub, taasoo ka dhigeysa inuu xor u yahay inuu wadahadalo la galo koox kasta waqti xaadirkan.
Christian Eriksen ayaa qeylo isaga ka dhan ah wuxuu kala kulmay taageerayaasha kooxda Tottenham Hotspur, ka hor inta uusan bilaaban kulanka xalay ee Middlesbrough.
Haddaba Jose Mourinho ayaa kaddib kulankii FA Cup-ka ay xalay guusha kaga gaareen kooxda Middlesbrough wuxuu kala hadlay warbaahinta arrinta ku saabsan mutaqbalka Christian Eriksen wuxuuna yiri:
“Christian Eriksen maanta si aad u wanaagsan ayuu u ciyaaray, wuxuu u ciyaaray qaab xirfadleh waana tan aan ka filayay isaga”.
“Haddii go’aankiisa uu yahay inuu baxo, waxaan qabaa inuu baxo isagoo madaxiiso kor ah”
“Taageerayaasha waa inay mar walba ixtiraam u muujiyaan isaga, waana inaan ixtiraamno go’aanka Eriksen, waxaan u maleynayaa inuu shaqo fiican qabtay maanta”.